Imboni Yezinsiza Ezifinyelelekayo | I-China Abakhiqizi Bezinsiza kusebenza ze-China
Imiphini ephindwe kabili yesixhumi seModel SPM-P
I-TDW non-gravity mixer ibizwa ngokuthi i-double-shaft paddle mixer nayo, isetshenziswa kakhulu ekuxubeni i-powder ne-powder, i-granule ne-granule, i-granule ne-powder kanye ne-liquid encane. Isetshenziselwa ukudla, amakhemikhali, i-pesticide, izinto zokuphakela kanye nebhethri njll Kuyinto ephezulu yokuxuba imishini futhi ivumelanisa ukuxuba osayizi abahlukahlukene bezinto ezinamandla adonsela phansi ahlukile, isilinganiso sefomula nokufana kokuxuba. Kungaba ukuhlanganiswa okuhle kakhulu lapho isilinganiso sifinyelela ku-1: 1000 ~ 10000 noma ngaphezulu. Umshini ungenza ingxenye yama-granules ephukile ngemuva kokuchobozwa kwemishini.
Ovundlile Iribhoni Mixer Model SPM-R
I-Horizontal Ribbon Mixer iqukethe ithangi le-U-Shape, izingxenye zokuvunguza nezokushayela. Kuvunguza kuyinto isakhiwo ezimbili. Ukuvunguza kwangaphandle kwenza ukuthi impahla ihambe isuka ezinhlangothini iye enkabeni yethangi nendawo yokuhambisa isikulufa sangaphakathi kusuka enkabeni kuye ezinhlangothini ukuthola ukuxubana okuvezayo. I-DP series Ribbon mixer yethu ingaxuba izinhlobo eziningi zezinto ikakhulukazi i-powder ne-luyimbudumbudu okunenduku noma ukubumbana komlingiswa, noma engeza oketshezi oluncane futhi unamathisele izinto zibe yimpuphu nezinto eziyimbudumbudu. Umphumela wengxube uphezulu. Isembozo sethangi singenziwa sivuleke ukuze kuhlanzwe futhi kuguqulwe izingxenye kalula.
Isikrini Sokuphakela Esivundlile nesithambekele SP-HS2
Iscrew feeder sisetshenziselwa ukuthuthwa kwempahla ye-powder, ingahle ifakwe umshini wokugcwalisa impuphu, i-VFFS njll.
Umshini Element Model ZKS
I-ZKS cleaner feeder unit isebenzisa i-whirlpool air pump ekhipha umoya. Ukufakwa kwempompo yokufakwa kokumunca nohlelo lonke lwenziwa lube sesimweni sokuhlanza. Izinhlamvu ze-powder zezinto zithathwa empompini wezinto onomoya omile futhi zakhelwa umoya ogeleza ngezinto. Ukudlulisa ishubhu lezinto zokumunca, bafika ku-hopper. Umoya nezinto zokwakha kuhlukaniswe kuyo. Izinto ezihlukanisiwe zithunyelwa kudivayisi yezinto ezitholwayo. Isikhungo sokulawula silawula isimo "sokuvula / ukuvala" se-pneumatic valve kathathu yokondla noma yokuhambisa izinto.
Ovundlile Intulo elihambayo (Nge hopper) Model SP-S2
Ukunikezwa kwamandla: 3P AC208-415V 50 / 60Hz
I-Hopper Volume: I-150L ejwayelekile, i-50 ~ 2000L ingahle yakhiwe futhi yenziwe
Ukudlulisa Ubude: I-0.8M ejwayelekile, i-0.4 ~ 6M ingahle iklanywe futhi yenziwe.
Isakhiwo sensimbi ngokuphelele, izingxenye zokuxhumana SS304;
Okunye Ukushaja Amandla kungakhiwa futhi kwenziwe.